ရင်သားကင်ဆာတိုးပွားလာခြင်း (Boob Job)
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများ
Izmir အစာအိမ်ပြွန်စျေးနှုန်းများ- အဝလွန်ခြင်းစင်တာ
2 ဇူလိုင်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
Germany Dental Veneers Prices- သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း
1 ဇူလိုင်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
Izmir Hollywood Smile ဈေးနှုန်းများ
Izmir သွားဘက်ဆိုင်ရာ Veneers စျေးနှုန်းများ- သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများ
သွားကုသမှု ဟောလိဝုဒ်အပြုံး ကုသ
Hollywood Smile လုပ်ငန်းစဉ်
15 ဇွန်လ 2022 18 ဇွန်လ 2022 curebooking
သွားသရဖူ သွားကုသမှု ကုသ
ကုသ သွားကုသမှု သွားဘက်ဆိုင်ရာ Veneers
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Veneers လုပ်ငန်းစဉ်
ကုသ သွားဘက်ဆိုင်ရာ implants သွားကုသမှု ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
ကုသ ဗေဒကုသမှု ရင်သားကင်ဆာလျှော့ချရေး ရင်သားကင်ဆာ
25 ဇွန်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
ရင်သား implant ဖယ်ရှားခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရင်သားအစားထိုးခြင်းများကို ဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအကြောင်းရင်းများ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဗေဒကုသမှု ရင်သားကင်ဆာလျှော့ချရေး ရင်သားကင်ဆာ မေမေကပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများ ကုသ Tummy Tuck
Turkey Mommy Makeover စျေးနှုန်းများ
1 ဇွန်လ 2022 14 ဇွန်လ 2022 curebooking
ဗေဒကုသမှု Liposuction ကုသ
တူရကီ Liposuction ဈေးနှုန်းများ - အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ - 1250€
28 မေလ 2022 14 ဇွန်လ 2022 curebooking
ဗေဒကုသမှု နှာခေါင်းယောဘ ကုသ
USA Rhinoplasty ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း 1900€
ဘ‌‌လော့ခ် DHI ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု အမေးအဖြေများ FUE ဆံပင်အစားထိုးခြင်း ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု ဆံပင်အစားထိုး ကုသ
27 မေလ 2022 14 ဇွန်လ 2022 curebooking
ဆံပင်အစားထိုးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ဆံပင် အစားထိုးခြင်း ကုသမှုသည် လူများတွင် ဆံပင် (ထိပ်ပြောင်ခြင်း) မရှိပါက ဦးစားပေး ကုသမှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ကုသ DHI ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု FUE ဆံပင်အစားထိုးခြင်း ဆံပင်အစားထိုး
ဆံပင်အစားထိုးကုသခြင်းအကြောင်း အားလုံး- FAQ
26 ခုနှစ်ဧပြီလ 2022 18 ဇွန်လ 2022 curebooking
ဆံပင်အစားထိုး DHI ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု FUE ဆံပင်အစားထိုးခြင်း ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု
အကန့်အသတ်မရှိ ဆံပင်အစားထိုးခြင်း 1.350€
22 ခုနှစ်ဧပြီလ 20226မေလ 2022 curebooking
ဒိန်းမတ်တွင် ဆံပင်အစားထိုးကုသခြင်း ဘယ်လောက်လဲ။
17 မတ်လ 2022 18 မေလ 2022 curebooking
Sleeve Gastrectomy ဆိုတာ ဘာလဲ Gastric Tube သည် အဝလွန်သူများ နှစ်သက်သော ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချသည့် ခွဲစိတ်မှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်များပေမယ့်
Dental Veneers တွေက ဘာတွေလဲ။ သွားများ ကျိုးခြင်း၊ စွန်းထင်းခြင်း သို့မဟုတ် စွန်းထင်းခြင်းများကြောင့် လူနာများ နှစ်သက်သည့် ကုသမှုများ
Hollywood Smile ဆိုတာ ဘာလဲ Hollywood Smile သည် ကုသမှုများစွာပါဝင်နိုင်သော သွားနှင့် အပြုံးအလှ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူများနဲ့မတူဘူး။
Dental Veneers ဆိုတာ ဘာလဲ Izmir Dental Veneers သည် သွားများဝါခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် သွားကြားရှိကွက်လပ်များကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊
Izmir သွားဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုး စျေးနှုန်းများ- အကောင်းဆုံး သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်း
30 ဇွန်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
Dental Implant ဆိုတာဘာလဲ။ သွားများ ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါတွင် သွားများကို အစားထိုးကုသခြင်းသည် ဦးစားပေးကုသမှုများဖြစ်သည်။ သဘာဝကျခြင်း။
ဂျာမနီရှိ Hollywood Smile စျေးနှုန်းများ
Hollywood Smile ဆိုတာ ဘာလဲ Hollywood Smile သည် ပြီးပြည့်စုံသော အပြုံးများအတွက် ရွေးချယ်စရာ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှု အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။ ဟောလီးဝုဒ် အပြုံးသည် အချိုးကျ ကုသပေးထားပြီး၊
ကုသ ဘ‌‌လော့ခ် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများ
ဂျာမနီ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများနှင့် ဈေးနှုန်းများ
29 ဇွန်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများသည် အဝလွန်သူများ နှစ်သက်သော ကုသမှုများဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ပြဿနာက ပြဿနာပါ။
ကုသ Gastric Botox ၊
Marmaris Gastric Botox ဈေးနှုန်းများ
28 ဇွန်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
Gastric Botox ဆိုတာဘာလဲ။ Gastric Botox သည် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ခွဲစိတ်မှုမဟုတ်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုးဖောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်၊
ကုသ အစာအိမ် Bypass လုပ်ရ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများ
Marmaris Gastric Bypass ဈေးနှုန်း
Gastric Bypass ဆိုတာ ဘာလဲ။ Gastric Bypass သည် အနှစ်သက်ဆုံး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Gastric bypass operations မှ အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကုသ အစာအိမ်ပူဖောင်း ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများ
Marmaris Gastric Balloon Treatment ဈေးနှုန်းများ
27 ဇွန်လ 20222ဇူလိုင်လ 2022 curebooking
Gastric Balloon ဆိုတာ ဘာလဲ။ Gastric Balloon သည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ပြဿနာရှိသော လူနာများ နှစ်သက်သော ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုသ အစာအိမ်အိတ် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း ကုသမှုများ
Marmaris ရှိ Gastric Sleeve စျေးနှုန်းများ
Gastric Sleeve ဆိုတာ ဘာလဲ။ Gastric sleeve သည် အဝလွန်ခြင်းကို ကုသရာတွင် အလွန်ပြင်းထန်သော ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝင်တယ်။
နိုင်ငံပေါင်း 30,000 မှ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဧည့်သည် 80။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ Curebooking
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်ကို ဦးတည်သောချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏ဘဝကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ကြသော ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဧည့်သည်များ၏ ဘုံအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ သင်သည် လျှို့ဝှက်အခကြေးငွေကို မည်သည့်အခါမျှ ပေးဆောင်ရမည်မဟုတ်ပေ။ Curebooking မင်းဆီက ကော်မရှင်ကို ဘယ်တော့မှမယူဘူး။ အထူးသဘောတူညီချက်များဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား သင်လက်ခံရရှိသည်ထက် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ အခမဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို သင်ရနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Cure Booking?
CureBooking ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ဆေးမဟုတ်သော ကုသမှုတိုင်းတွင် သင့်အား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တူရကီရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများနှင့် စင်တာများနှင့် သဘောတူညီမှုများရှိသည်။ ဤသဘောတူညီချက်များကြောင့် သင်သည် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်သည်။ Curebooking. Curebooking အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအဖြစ် တူရကီရှိ အကောင်းဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ လူနာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးအပြင် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြစ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့် အထူးစျေးနှုန်းများဖြင့် ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ curebooking လူနာများ။
အရေးကြီးသောအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးစံနှုန်းများအဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို မြှင့်တင်ရန် လွတ်လပ်မှုရှိရန် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ တူရကီရှိ သီးသန့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပက်ကေ့ချ်များကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များသည် တူရကီတွင် အပန်းဖြေအားလပ်ရက်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဆေးဝါးကုသမှုကို ခံစားနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
CureBooking အရည်အသွေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ တူရကီတစ်ခွင်လုံးတွင်ရှိသော ဂုဏ်သတင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များကြားတွင် သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
သင်၏ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အားလပ်ရက်များအကြောင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များသည် အားလုံးပါဝင်သော ပက်ကေ့ခ်ျများဖြင့် ၎င်းတို့၏ အားလပ်ရက်များနှင့် ကုသမှုအားလုံးကို တတ်နိုင်သည် ။ သို့မဟုတ် သူသည် ယခင်စီစဉ်ထားသည့် အားလပ်ရက်ကို သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၊ Curebookingသင့်အား အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကို ပေးဆောင်ရန် ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။
တူရကီကိုကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှ visitors ည့်သည်များအားဆွဲဆောင်သော၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းဝင်နှင့်သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများကြောင့်လူသိများခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တွင်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ထောင်နှင့်ချီသော visitors ည့်သည်များနိုင်ငံသို့လာရောက်ရသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တူရကီသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျန်းမာရေးခရီးသွားနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူနာများသည်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလာရောက်ရန်လာရောက်နေကြသည်။
အစိုးရသည်ကျန်းမာရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတက်ကြွစွာမြှင့်တင်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားသားလူနာ ၂ သန်းကိုလက်ခံရန်နှင့် ၂၀၃၃ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ ကျော်ရရှိရန်အစီအစဉ်များရှိသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနိုင်ငံခြားလူနာ ၁ သန်းကျော်သည်တူရကီဆေးရုံများသို့လာရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ sector နှင့်ခေတ်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများမှနည်းပညာသစ်များကြောင့်တူရကီသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ visitors ည့်သည်များအတွက်ဆေးကုသမှုနေရာဖြစ်လာသည်။ ကျန်းမာရေးစင်တာများနှင့်ဆေးရုံများသည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီးကောင်းမွန်သောနေရာထိုင်ခင်း၊ အကောင်းဆုံးဆေးဝါးများ၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများနှင့်အခြားအရာများအားထောက်ပံ့ပေးသောအဆောက်အအုံများမှစောင့်ရှောက်မှုရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေနေသောခရီးသွားများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 CureBooking.All rights reserved.
theme: အရောင် ThemeGrill ကဖြစ်သည်။ မှပံ့ပိုးသည် WordPress.